घर–आँगनमा गरिने धार्मिक अनुष्ठानमा के समस्या भयो ? | Bhutan News Service
घर–आँगनमा गरिने धार्मिक अनुष्ठानमा के समस्या भयो ?
तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापनापछि आफ्नो आस्था कायम राख्ने धेरैलाई कति धार्मिक अनुष्ठान सजिला भएनन् । पहिलो त यहाँ पनि त्यसरी नै आफ्ना धार्मिक कर्म गर्न पाइने हो वा होइन भन्ने भयो । किनभने धर्म, संस्कृतिकै कारण आफ्नो देश छाड्नु परेको थियो । डर थियो । जब आफ्ना धार्मिक काम गर्न पाइन्छ भन्ने धेरैलाई ज्ञान भयो । आफ्नै तरिकाले मनाउने प्रयास गर्दा सजिलो भने भएन । घरमा यस्तो अनुष्ठान गरिँदा अरुलाई बाधा हुनुहुँदैन भन्ने शुरुमा कसैले बुझाइदिएनन् । यहाँका नियम बुझ्न अलि समय लाग्यो । अहिले अधिकांशले धेरै सजिलो भएको महसुस गर्नुभएको छ ।
को परे, अप्ठ्यारामा ?
सन् २०१८ नोभेम्बर अन्तसम्म अमेरिकामा पुनर्स्थापितको संख्या ९६ हजार १ सय ४७ पुगेको छ । पुनर्स्थापितमध्ये करिब ५७ प्रतिशत हिन्दू, २२ प्रतिशत बौद्ध, ११ प्रतिशत इसाई र १० प्रतिशत किराँत धर्मावलम्बी हुनुहुन्छ । सबै नै सानोतिनो अप्ठ्यारो पर्नुभएको हामीले देखेका छौं ।
के सजिलो ? के अप्ठ्यारो ?
घरभित्र २-४ जना मिलेर अरूलाई बाधा नपुग्ने गरी गरिने जन्मोत्सव, भेटघाट कार्यक्रमले केही अप्ठ्यारो पार्दैन । तर धेरैको संख्यामा भेला हुनुपर्ने धार्मिक अनुष्ठानले भने अप्ठ्यारो पारेको देखिएको हो ।
घरहरुले बोक्नसक्ने तौल हामीले कहिल्यै ख्याल नगरेको तथ्य हो । के एउटा सामान्य घरको तेस्रो तलामा एक सय मानिस भेला हुन सकिन्छ ? प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन । त्यसैले घरले बहन गर्ने तौललाई हेक्का राख्नुपर्छ ।
घरभाडामा बस्ने मानिसले जति आफ्नो घर भएकाले सतर्क हुनु नपर्ला । तर घर भएकाको समस्या फरक छन् ।
केही उपाय छन् त ?
घर–आँगनमा अनुष्ठान गर्नुपरे हामीले मुख्य रुपमा दुई निकाय र व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्न आवश्यक हुन्छ, ती हुन्ः
१. नगर (सिटी)कार्यालय,
२. स्थानीय प्रहरी तथा
३. आफ्नो छरछिमेक
सम्पर्क मात्र गरेर भएन कुरा बुझाएको हुनुपर्छ । सिटी हल र स्थानीय प्रहरीमा निवेदन दिनुपर्ने हुनसक्छ । अनि छिमेकीलाई के गर्न लागेको हो भनेर बुझाएको हुनुपर्छ ।
नगरहरुले छरछिमेकमा पालना गर्नुपर्ने नियमको संहिता बनाएका हुन्छन् । यसको अध्ययन गरेः कति शुल्क तिर्ने ?, के गल्ती भएमा कति जरिवाना ?, अरू प्रावधान के के छन् ? आदि बुझ्न सकिन्छ ।
प्रहरीलाई जानकारी गराउनु पर्छ । आफ्नो कार्यक्रम के हो ? के के हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्दा जस्तो सजिलो केही हुन्न । अर्को चाही प्रहरीलाई बुझाउन सक्नुभयो भने नगरका नियम, फोहोर व्यवस्थापन, छरछिमेकमा गर्ने व्यवहार जस्ता धेरै जुक्तिहरु सिक्न पाइन्छ ।
अनुष्ठानबारे अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा पर्ची बनाएर बाँढे छरछिमेकी, नगरका हाकिम, राज्यस्तरका प्रतिनिधिलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ । उहाँहरुलाई स्वागत गर्न पाइन्छ । यो यहाँको समाजमा समायोजन हुने तरिका पनि हो ।
पोकापोकी फोहोर व्यवस्थापन सजिलो हुँदैन । यसका लागि ठूलो बाकस जस्तो भाँडो (डम्पस्टर) भाडामा लिन सकिन्छ ।
अनि भाडामा बस्ने वा सीमित ठाउँ भएका व्यक्तिले सामान्य–भन्दा सामान्य कुरा जुत्ता–चप्पल छरपस्ट छाडिदिनु हुँदैन ।
घरमा कार्यक्रम गर्नेले सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने मापदण्ड पूरा गरिदिनुपर्छ । यसको अनुष्ठान गर्नुअघि नै तयारी हुनुपर्छ ।
अर्को पक्ष भनेको छिमेकीले बुझेको छैन वा उनको स्वीकृति छैन भने हल्ला, र गाडी पार्किङ्गको विषयलाई उनले बोलाउने प्रहरी हो । घर भएका बस्तीमा दशौं वा सयौं गाडी पार्किङ्गका ठाउँ पक्कै हुँदैनन् । निम्तालुले पार्किङ्ग तोकिएको ठाउँमा गरून् ।
सामान्य खालको भेटघाटमा पनि हल्ला हुने सामग्रीको प्रयोग नभएको राम्रो मानिन्छ । राती ८ बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म सुत्ने समय हो भनेर पनि सोच्नुपर्छ । यो भयो, घरभित्रका कुरा । घरबाहिरका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हल्ला गरेर बाधा त पक्कै गर्नुभएन । तर निश्चित समयमा मात्र माइक, स्पिकर आदि चलाउन मिल्छ ।
के बुझ्नुपर्छ भने सानोभन्दा सानो कार्यक्रमले पनि अरुलाई बाधा गर्न सक्छ, र त्यसका विषयमा उजुर गर्न सकिन्छ । कतिपय ठाउँमा निश्चित आकारभन्दा ठूलो पाल राख्न अनुमति लिनुपर्ने हुनसक्छ ।
निस्कने फोहोर एकातिर भयो, अर्कातिर जताततै चुरोटका ठूटा फ्याँक्ने, थुक्ने, अगरबत्ती, मैनबत्ती बाल्ने र अन्य प्रदूषण कसरी कम गर्ने आयोजक चनाखो हुर्नैपर्छ । आगलागी हुनसक्ने भएकाले चुरोटको ठूटा फ्याँक्दा वा अगरबत्ती, मैनबत्ती बाल्दा सतर्क हुनु नै पर्छ ।
सार्वजनिक हलको प्रयोग
अहिले यस्ता अनुष्ठान सार्वजनिक हलमा गर्नेको संख्या बढेको छ । सभ्य समाजका लागि यो उत्तम उपाय हो । समुदायका सदस्यले बुझ्न थाल्नुभएको छ । यसरी कार्यक्रम गर्दा पनि पालना गर्ने हलका नियम छन् । यसमा पनि सिटी हल र स्थानीय प्रहरीसँग सम्पर्क गर्ने तथा खाँचो परे निवेदन दिनुपर्ने हुनसक्छ । हलमा प्रयोग गर्दा हामी पार्किङ्ग, अरु दायित्वहरु, उजुरीबाट बच्छौं ।
(अक्षरिका, डिसेम्बर २०१८ को अंकबाट)
तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापना
Previous articleधूमिल जून: अलमलिएको स्रष्टा ऐना जिस्काउँछ (कृति-परिचय)
Next articleसंयोगान्त, तर आँखा रसाउने लेखन: छाप्रो नम्बर ५५